Discover and Read the Best of Twitter Threads by @misazimbabwe
@misazimbabwe Follow on Twitter
@Mukoma59 asks how immune to capture and propaganda would community radio stations be?
@donald_mukota @capitalkfm @euinzim @MAZ_Zim @pzirima @kudathove @TabaniMoyo @rashweatm @aventures @forfreemedia @fojo_int @kubatana @ZimMediaReview @jsnetzim
@Mukoma59 @donald_mukota @capitalkfm @euinzim @MAZ_Zim @pzirima @kudathove @TabaniMoyo @rashweatm @aventures @forfreemedia @fojo_int @kubatana @ZimMediaReview @jsnetzim A caller wonders how we have missed it as Zimbabwe, says that countries such as South Africa have community radio stations at University level.
Discussion currently happening on @capitalkfm on community radio stations
@Mukoma59 @donald_mukota @capitalkfm @euinzim @MAZ_Zim @pzirima @kudathove @TabaniMoyo @rashweatm @aventures @forfreemedia @fojo_int @kubatana @ZimMediaReview @jsnetzim @ZacrasOnline The govt under the new dispensation is still challenged with the licensing of community radio stations despite the fact that they are provided for in the constitution- Chirinda says
@PatsakaCRI @ZacrasOnline @MAZ_Zim @donald_mukota @JohnChirinda @InfoMinZW
Justification for granting broadcasting license unclear at law
#broadcasting #medialaws #Zimbabwe
@NLinZimbabwe @forfreemedia @OSISA @VoteWatch263 @ZimMediaReview ⁦ ⁦@InfoMinZW⁩ ⁦⁦@OSISA⁩ ⁦@263Chat⁩ ⁦⁦@UKinZimbabwe⁩ ⁦⁦@euinzim⁩ ⁦⁩ ⁦
@NLinZimbabwe @forfreemedia @OSISA @VoteWatch263 @ZimMediaReview @InfoMinZW @263Chat @UKinZimbabwe @euinzim National daily newspaper, The Herald, recently published an article in which the immediate former perm sec of Information George Charamba explained circumstances under which broadcasting licences were issued in the absence of a Broadcasting Authority of Zimbabwe (BAZ) Board.
@NLinZimbabwe @forfreemedia @OSISA @VoteWatch263 @ZimMediaReview @InfoMinZW @263Chat @UKinZimbabwe @euinzim According to Charamba, the licences issued to entities such as Powertel, Zimpapers, Alpha Media Holdings and Econet were issued as part of the clerical functions of BAZ.
Recommendation 15: ZBC needs to be reformed into a truly independent public service
broadcaster and state-owned media must abide by their legal obligation to be impartial and
provide equitable treatment to all political parties and candidates.- @eueomzimbabwe
@eueomzimbabwe In accordance with the Electoral Act, from 4 July the state broadcaster ZBC afforded free access to political contestants through various programming aired on TV and radio stations. - @eueomzimbabwe report
@eueomzimbabwe Nevertheless, ZBC failed to abide by its legal obligation of ensuring equitable and fair treatment to all political parties and candidates in its news and current affairs programmes.- @eueomzimbabwe report